Omeo ny Feon'ny Noverezin-jo tsy nanao heloka | Hevitra MPANOHARIANA |
Omeo ny Feon'ny Noverezin-jo tsy nanao heloka
2013-10-23 @ 22:28 in Politika
Misy ireo nitatitra fa nahazo karatr'olona tsy fantatra anarana miray trano amin'izy ireo ary maromaro mihitsy, efa tao anatin'ny fanahiako moa ny tsy fetezan'ny fanaovana ny lisitra ho araka ny abidia satria ahafahana mampiditra olona hafa tsy ampoizina ho lazaina ho miray trano aminao. Tsy dia any loatra ny resako etoana fa mitodika kosa any amin'ireo olona noverezin-jò tsy satry.
Niniana ve sa tsia fa efa tratra aoriana mihitsy vao nivoaka avy any ilay lisitra. Mahana tamin'ny nataony ve ny CENIT ka niandrasana ora na andro farany vao navoaka ny lisitra sy ny kara-pifidianana, avy eo indray toa tsy misy ilàna azy indray ilay kara-pifidianana fa kara-panondro dia mahavita azy. Toa vola nolanilaniana foana na nariana foana na navily lalana ho any am-paosin'ny sasany angamba ny nanaovana ireny kara-pifidianana ireny sy ny kojakoja hafa toy ny vatom-pifidianana. Karazana halatra ankolaka ihany ilay tsy famelana intsony ny olona hahazo hifidy satria hoe tsy tafiditra anaty lisi-pifidianana. Efa tsy misy resaka fahadisoana ao anaty karatra intsony eto an! Fahadisoan'ny CENIT ve no hanasaziana ny olom-pirenena? Tsy rariny izany! Omeo ireo olona ireo ny zony.
Tsy vitan'ny teny toy izao anefa ny fitakiana fa tsy maintsy misy fiarahan'ireo olona an'arivony, na an'aliny eny mety ho an'hetsiny mihitsy aza noverezin-jò nefa tsy voasazin'ny fitsarana. Efa nisy ny didim-pitsarana tsy azo nivalozana nefa novàna ihany ka ho tombontsoa ambonin'ny firenena sy hitandroana ny filaminana, noho ny lonilony mety hipoaka raha maro loatra ny very zo ary ahiana ho noho ny safidy noverezina mihitsy aza no nampiova ny valim-pifidianana dia mivantana ilay fitakiana. Avereno amin'ireo olona ireo ny zony rehefa tsy nisazy izy. Itadiavo lalana ny hahafahan'izy ireo mifidy. Raha tsy hita mihitsy ny lalana haleha hamahana izany olana izany dia avereno ny "ordonnance" eny amin'ny fitsarana. Aza saziana amin'ny heloka tsy nataony ny vahoaka.
Raha tsy niomana amin'ny fanaovana ordonnance ny eny amin'ny fitsarana, dia mamoaha haingana tetibola ho amin'izany fa raharaham-pirenena no atrehina fa tsy kilalaon-jaza tsy akory. Sokafy ny Lapan'ny Fitsarana rehetra manerana ny nosy amin'io andron'ny zoma 26 oktobra 2013 io ary avoahy ny filazana fa ekena ny "ordonnance" ahafahan'ny olon-drehetra mifidy, fa tsy tsara loatra ilay hoe amin'ny alalan'ny kara-pokontany indray no ifidianana.
Ho anareo very zo rehetra kosa, tsy dia manan-kevitra loatra amin'izay tokony atao aho fa soso-kevitra fotsiny no apetrako. Mivondròna mankeny amin'ny biraon'ny CENIT akaiky anareo na eny amin'ny lapan'ny fitsarana amin'ny androm-pifidianana. Eny ianareo mahita ny hamaroanareo sy mahatsapa fa vondron'olona tsy azo tsinontsinoavina ianareo. Takio am-pilaminana ny zonareo hahazo mifidy. Antsoy ny mpanao gazety, antsoy ny fampielezam-peo sy ny fahitalavi-panjakana hanaovana fitarainana sy ilazanareo fa efa miandry sy vonona ho amin'ny fandrotsaham-bato ianareo. Ny firaisan-kina no hery. Raha manana hevitra hafa ianareo dia ampitao haingana araka izay azo atao izany. Mampiasà ny teny ifankafantarana #mdg2013 amin'ny tambajotra serasera toy ny Facebook na Twitter fa aza miraviravy tanana tsy hanao na inona na inona na hikaton-trano ao! Hevitra tsotra ny ahy fa raha misy ny tsara kokoa dia raisina an-tanandroa izany. Mankasitraka anareo rehetra!
24 jolay sasakalina sy sasany ora!